चारै दिशाबाट काबुल प्रवेश गर्दै तालिवानी, सरकारी कर्मचारीको भागाभाग — Sanchar Kendra
चारै दिशाबाट काबुल प्रवेश गर्दै तालिवानी, सरकारी कर्मचारीको भागाभाग
काठमाडौँ । तालिवान लडाकुहरू राजधानी काबुल प्रवेश गर्न सुरु गरेको अफगानिस्तानको गृह मन्त्रालय र विद्रोही समूहले जनाएको छ । आइतबार पूर्वी सहर जलालाबाद कब्जा गरेको केही घण्टापछि नै विद्रोहीहरू काबुल प्रवेश गर्न सुरु गरेको समाचार आएको हो ।
अफगान सरकार र तालिवानबीचको वार्ता स्थल बनेको दोहामा रहेका एक तालिवानका नेताले हिं’सामा जोड नदिन र काबुल छाडेर जान चाहनेहरूलाई सुरक्षित रूपमा जान दिन निर्देशन दिइएको अलजजिरालाई बताएका छन्। अब राष्ट्रपति असरफ घानीले तालिवानसँग संघर्ष गर्छन् वा आत्मसमर्पण गर्छन्, त्यो चाहिँ स्पष्ट भइसकेको छैन ।
​यता, राष्ट्रपति घानीको कार्यालयका प्रमुखले ट्वीटरमा काबुलका जनतालाई नअत्तालिन आग्रह गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘कृपया चिन्ता नलिनु होला । केही समस्या छैन । काबुलको अवस्था नियन्त्रणमा छ ।’ तालिबान विद्रोहीहरू चारै दिशाबाट राजधानी प्रवेश गर्न थालेको समाचार आए लगत्तै उनले यस्तो ट्वीट गरेका थिए । शनिबार साँझ ट्वीटरमा छोटो सन्देश दिएयता घानी भने सार्वजनिक रूपमा देखिएका छैनन् ।
यता, तालिवानले आफूहरू काबुल प्रवेश गर्न थालेको सूचना जारी गर्दै आफूहरू शक्ति प्रयोग गरेर काबुल कब्जा गर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेको छ । अलजजिराका रिपोर्टर चार्लट बेलिसले गोलीबारीसहित साइरनको आवाज सुनिएको बताएकी छन् । सहरमा हेलिकप्टरहरु लगातार उडिरहेको उनको भनाइ छ । कर्मचारीहरू सरकारी भवन छाडेर भागेका छन् भने सर्वसाधारणहरू खुला पार्कमा बस्न थालेका छन् ।
के भन्छ सरकार?
राष्ट्रपतिको कार्यालयले पास्तो भाषामा ट्विटरमा लेखेको छः “काबुलमा फाट्टफुट्ट गोली चलेको छ, काबुलमा आक्रमण भएको छैन। सहरको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न देशका सुरक्षा र प्रतिरक्षा फौजहरू विदेशी साझेदारसँग मिलेर काम गरिरहेका छन्, स्थिति नियन्त्रणमा छ।”
तर एक अफगान सांसद फर्जाना कोचाईले बीबीसीलाई मानिसहरू राजधानीबाट भाग्न कति आतुर छन् भनेर बताएकी छन्। “मलाई थाहा छैन, उनीहरू कहीँ पनि जान सक्दैनन्। कुनै ठाउँ बाँकी छैन। विमानहरू भरिएका हुनसक्छन् अनि आज काबुलबाहिर – जस्तै भारत वा अन्य छिमेकी मुलुक जाने – उडान पनि। मैले त्यता जान लागेका साथीहरूसँग सोधेकी थिएँ।” “उनीहरूका अनुसार विमान भरिएका र आफूहरू अड्किएका छन्,” उनले भनिन्।
अफगान युद्धको पृष्ठभूमि के हो?
सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामाथि हमला भएको एक महिनापछि अमेरिकाले पनि अफगानिस्तानमा हवाई हमला सुरु गर्‍यो। तर तालिबानले अमेरिकामाथि हमला गर्ने ओसामा बिन लादेन अमेरिकालाई सुम्पिन अस्वीकार गर्‍यो।
त्यसपछि अमेरिकासँग अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन जोडिन पुग्यो र तालिबान तत्कालै सत्ताबाट हट्यो। यद्यपि उक्त समूह विद्रोही फौजमा परिणत भयो र घातक हमलाहरू निरन्तर जारी राख्दै अफगान सरकारलाई अस्थिर बनायो। अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनले सन् २०१४ मा आफ्नो सैन्य अभियानअन्त्य गर्‍यो र अफगान फौजलाई तालिम दिनमा मात्रै आफूलाई सीमित राख्यो।
पाकिस्तानसँग भारत पराजित भएपछि खुसी मनाउने तीन विद्यार्थी पक्राउ
मुस्लिम धर्म परिवर्तन गरेर पूर्वराष्ट्रपतिकी छोरी बनिन् हिन्दू, देशभर तरंग
अष्टलक्ष्मीको मुख्यमन्त्री पद गुमेपछि ओलीले बोलाए स्थायी कमिटी बैठक
मलेसियाको रोजगारी खुल्यो, श्रमिक लैजाने कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्नेछ यी खर्च
काँग्रेस शीर्ष नेताहरुको बैठकमा चोलेन्द्रको चर्चा, लफडा रोक्न देउवाले के गरे ?
अष्टलक्ष्मी शाक्यको मुख्यमन्त्री पद धरापमा, आज मत नपुगे अब को बन्छ नयाँ मुख्यमन्त्री ?
विश्वकपमा पाकिस्तानको लगातार दोस्रो जित, न्यूजिल्यान्ड ५ विकेटले पराजित
विश्वभर ४ लाख २३ हजार कोरोना संक्रमित थपिए, ३ लाख ७९ हजार निको